आणबिक हतियार बिस्तारमा अग्रणी अमेरिका !
अमेरिकी प्रशासन उत्तर कोरियाले एउटा हाइड्रोजन बम बनाउदा ठूलो बिरोध मच्चाउने गर्दछ । तर अमेरिका स्वयं भने अहिले पनि आणबिक शक्ति राष्ट्रमा बिश्वमा अग्रणी मात्रै छैन नयाँ नयाँ संस्करण र श्रृंखलाका यस्ता आणबिक एबं परमाणबिक घातक हतियार पनि लगातार बनाउँदै आएको छ र यस्ता शस्त्रास्त्र निर्माणको होडमा पनि सबैभन्दा अग्रणी रहेको छ ।अमेरिकाले यतिबेला साना परमाणु हतियार बनाउने जुन अभियान आरम्भ गरेको छ त्यो बिश्वका लागि अझ भयावह र अत्यन्तै खतरनाक मानिदैछ । सम्भव छ कि यसबाट परमाणु हतियारको अर्को एउटा ठूलो होडबाजीको काल खण्ड शुरु हुनजाओस् । भनिन्छ बिगत पाँच बर्षदेखि अमेरिका यस्ता साना परमाणु हतियाहरुको परीक्षण र प्रयोगमा तल्लिन छ जुन हतियारहरु लामो दूरीका निमित्त नभएर छोटो दूरीका लागि नै परिलक्षित र सक्षम छन् । अनि तिनमा सबैभन्दा ठूलो र फरक र बिशेषता के कुराको रहेको बताइन्छ भने तिनबाट हुने नोक्सानको दायरा घटाउने र बढाउने गर्न पनि सकिन्छ । बी ६१ मोडेलका १२ यस प्रकारका बम जसलाई बितेको पाँच बर्षअमेरिकाको नेभादा राज्यमा परीक्षण गरिएको थियो यो पाँच नयाँ हतियारहरुको श्रृङ्खलामा पहिलो भनिएको छ । आणबिक पुनरोद्धार कार्यक्रम अन्तरगत तिनको निर्माण गरिदै रहेको बताइएको छ । यस कार्यक्रमा तीन दशकका लागि एक खर्ब डलर खर्च गरिने योजना रहेको छ । अचम्मको कुरा त के लाग्दछ भने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफ्नो सपथ ग्रहणको बेलाको प्रतिबद्धताका बिपरीत त्यस्ता शस्त्रास्त्र निर्माणमा लागेका थिए । सपथ ग्रहणको बेला उनले परमाणु हतियार मुक्त बिश्व कायम गर्ने प्रस्ताब गरेका थिए । अनि त्यसै कुराबाट प्रभावित भएर नोबेल कमिटीले उनलाई ‘पिस प्राइज’ पनि प्रदान गरेको थियो । अनि उनले अमेरिकाले नयाँ हतियार बनाउने छैन भन्ने कुरा पनि दोहोराइरहेका थिए । शायद यसैले होला उनका त्यतिबेलाका अधिकारीहरु दाबी गरिरहेका थिए कि ती उतिबेला बनाउन लागिएका हतियार नयाँ होइनन् । ती पुरानै हतियालाई उन्नत रुप दिइएको मात्र हो । उनीपछि अमेरिकामा उदाएका बर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प त झन ओबामाभन्दा बढी उग्र र दक्षिणपन्थी मानिन्छन । उनले नेभादा हतियार परियोजनालाई झनै बढावा दिएको अनुमान गरिन्छ । उनको नीति नै हरेक क्षेत्रमा अमेरिकालाई पहिलो बनाउने त छँदैछ । उनले चुनाव पनि यही नाराका आधारमा जितेका पनि हुन् ।
यद्यपि हात हतियार बिज्ञहरु भन्ने गर्दछन् कि हतियारहरुको आधुनिकीकरणबाट कतिपय साना हतियार बिकसित गर्नु कुनै गल्ती नहुन पनि सक्तछ । ती अत्यन्तै घातक भएको र तिनको उपयोग खतरनाक हुने भएकाले तिनको कमै प्रयोग गरिएला कि भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर अमेरिकी प्रशासनका बिज्ञहरु ती हतियार अत्यन्तै अचूक र अत्यन्तै प्रभावकारी हुने भएकाले तिनको उपयोग गर्ने प्रलोभनबाट बच्न सहज छैन भन्दै आएका छन् । अझ थप आशंका त के छ भने कतै प्रतिरोधको साटो यस्ता खतरनाक अतियारको प्रयोग आरम्भिक हमलाका बेलामा नै हुन नथालिएला भन्न पनि सकिदैन । अनि अमेरिकाले चलाउदै आएको यो अमेरिकी आणबिक हतियार अभियानबाट शक्तिशाली अरु देशहरुको पनि कान ठाडो भइसकेको हुनु पर्दछ र र हुन्छ नै । रुसले बी ६१ को परीक्षणलाई गैर जिम्मेवार र खुलेआम चूनौति दिने परीक्षण बताइसकेको छ । चीन पनि परमाणु सुसज्जित क्रुज मिर्साईलबाट हैरान छ । यी देशले पनि यसरी नै यसै प्रकारका हतियारले आफुलाई सुसज्जित गर्न थाले भने त्यो कुनै आश्चर्यको बिषय बस्तु हुने छैन भन्ने पनि आणबिक हतियार बिशेषज्ञहरुको टिप्पणी छ ।
स्पष्ट छ, बिश्वमा परमाणु हतियारको बिषय एउटा बर्जित क्षेत्रकै जस्तो कुरा थियो, जहाँ प्रवेश गर्ने या घुस्ने कुनै कोशिश कसैले गरिरहेको थिएन । उत्तर कोरिया जस्तो देशले केही बर्ष पहिला हाइड्रोजन बमको सफल परीक्षण गरेको घोषणा गर्दा त्यसको चारैतिरबाट आलोचना भएको थियो । त्यसको कारण पनि यही बर्जना नै थियो । तर अरुअरुलाई यस प्रकारका हतियारबाट टाढै रहन उपदेश दिने अमेरिका स्वयम भने परमाणु हतियारको होडको नयाँ चरणको शुरुवात गरिरहेको थियो भन्ने कुरा प्रष्ट छ । के यो अमेरिका भित्र उसको बढ्दो असुरक्षाको देन हो ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ नै र उठेको पनि छ । निश्चय नै आज बिश्वमा हतियार निर्माण लगायतका नयाँ बिकसित प्रबिधि(तकनिकी)लाई रोक्न सजिलो छैन । यदि त्यस्तो प्रबिधि आतंकबादीहरुको हातमा पर्न गयो भने त्यसको दुष्परिणाम के होला कल्पनासम्मगर्न पनि सन्त्रासमय लाग्दछ । अझ दुर्भाग्य त के छ भने संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता बिश्व संस्थाहरु पनि त्यत्तिको सबल र सक्षम रहेका छैनन् कि शक्तिशाली देशहरुमाथि प्रभाव पार्न सकुन् । यस्तो स्थितिमा बिश्व शान्तिका लागि अझ खतरा बढ्नु स्वाभाविक हुनपुग्दछ । सम्पूर्ण बिश्वभरीकै लागि यो आजको ठूलो चिन्ताको बिषय हो ।